कडा र लामो तल थिच्दा पानी झर्ने के हो ? भन्दै रत्नपार्कमा तहल्का मच्चाउदै हट मोडल सबनम चौधरी [हेर्नुहोस भिडियो सहित] - pnpkhabar.com
You are at:Home»भिडियो»कडा र लामो तल थिच्दा पानी झर्ने के हो ? भन्दै रत्नपार्कमा तहल्का मच्चाउदै हट मोडल सबनम चौधरी [हेर्नुहोस भिडियो सहित]
By मनिषा थापा on १० बैशाख २०७५, सोमबार ०६:४२ भिडियो
पिएनपिखबर, भक्तपुर : सामाजिक संजालको प्रयोग आजको दिनमा यति जरुरी भइसकेको छ की यसको विना एक पल बिताउन पनि कठिन हुने अबस्था छ। अझ युवापुस्ताको कुरा गर्ने हो भने इन्टरनेटबाट टाढा रहनै नसक्ने खालको गाढा प्रभाव उनीहरुमा परेको देख्न सकिन्छ । फेसबुक, भाइबर, युटुब र इन्स्टाग्राम आदि जस्ता चिजले हाम्रो जिन्दगी नै बदलिएको छ भन्दा केहि फरक नपर्ला। हामीले एक डिजिटल दुनियाँ बनाएका छौ। अहिले यूट्यूबमा हामी समाचारमुलक त्यस्तै ज्ञान, विज्ञान मनोरन्जात्मक सबैकुराहरु भेट्ने गर्छौ।
पिएनपिखबरले दर्शकश्रोतालाई सत्य तथ्य समाचार र मनोरन्जनको सामाग्री सम्प्रेषण गर्दै आइरहेको छ। हाम्रो अफिसियल युटुब च्यानल पिएनपि मेडिया मार्फत हामीले थुप्रै रोचक, समाचारमुलक, सुचानात्मक र मनोरन्जनात्मक भिडियोहरु पस्किदै आएका छौ। सो क्रममा आज हामीले मनोरन्जनात्मक कार्यक्रम ‘रोड शो’ लिएर आएका छौ।
कार्यक्रम रोड शोमा हामीले आज दिमागको टेस्ट गर्नको लागि केहि दिमाग खियाउने खालका प्रस्न सोधेका छौ। आफु जसलाई पनि बुद्धिमानी नै लाग्छ तर केहि प्रश्न यस्ता पनि हुनसक्छन जसले तपाईको दिमागलाई नै खलबलाईदिन्छ हो यस्तै खालको सुन्दा अप्ठ्यारो लाग्ने तर बुझ्दा सजिलो र रमाइलो प्रश्न त्यस्तै दर्शकहरुको गज्जबको उत्तर लिएर हामीले यो सामग्री प्रस्तुत गरेका छौ।